Makpụrụ Mafia Island maka ụzọ ọhụụ maka njem nleta kọwara
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Makpụrụ Mafia Island maka ụzọ ọhụụ maka njem nleta kọwara
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
35 min gụọ
Tanzania na Zanzibar amaliteghachiri n'ụdị njem nlegharị anya ọhụrụ. Peter Byrne, CEO nke Agwaetiti Mafia na Tanzania, mepụtara usoro 20 ma webata ya na iwughari. njem n'elu ikpo okwu: “Ka anyị wulite mmadụ gburugburu echiche nke 'njem ọhụrụ' (nwayọ, miri emi, obiọma, obodo, nkwado, ihu igwe) ya na ile ọbịa, n'ihu, na etiti - dịka 'ọbịa' ọ bụghị onye na-abụghị onye. ”
Na enweghi nsogbu obula nke coronavirus na mba East Africa a, ndi oru nke ndi mmadu eburu uzo mepee uzo ohuru nke otutu uzo ahia nwere ike ime. Agwaetiti Mafia bụ osimiri mara ama na ọdụ mmiri na Tanzania.
Nke a bụ transcript na vidiyo nke ngosi nke Peter Byrne, Mafia Island, Zanzibar, Tanzania mepụtara, nke nwere ike ịbụ ụkpụrụ maka ọtụtụ:
Ihe ngosi site Peter Byrne, agwaetiti Mafia, Zanzibar, Tanzania
Daalụ, Juergen, maka ohere a ịkekọrịta mba anyị ma gosipụta ihe ndị ọ rụzuru.
Morningtụtụ ọma nụ ndị mmekọ niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chọta ụzọ isi azaghachi ọrịa a. Ka m chọtara - ọ kachasị otu a - nwekwuru ntụkwasị obi m mepụtara na e nwere ọtụtụ ụzọ anyị nwere ike isi chee ma rụọ ọrụ iji weghachite ihe kachasị mma nke ụlọ ọrụ anyị ma chọta "ọhụụ ọhụrụ" nke aka anyị, nke bụ , n'ezie, njem nleta na-eme ihe niile iji chebe gburugburu ebe obibi anyị dabere. Ya mere ijikwa njegharị ga-abụ otu n'ime ogidi nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ma nke ahụ na-amalite site na ụlọ nkwari akụ ọ bụla na onye na-eweta ọrụ, ụgbọelu ọ bụla na ụgbọ mmiri na njem njikwa nzukọ. Governmentrụchi ọrụ gọọmentị na nke onwe nke DMO arụ ọrụ ugbu a egosila na ọ dị mkpa. Boardslọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ abụghị ndị DMO na ọrịa a emeela ka ọ pụta ìhè ọrụ dị mkpa ndị a na-arụ mgbe ịchọrọ ha, na-eweta akụkụ niile nke ijikwa njem - akụrụngwa, ngwa ngwa, nchekwa na nchekwa, ọrụ, ụkpụrụ, na ụkpụrụ - na etiti nhazi . DMO ndị a ga-abụkwa ndị ọkwọ ụgbọ ala nke mmegharị njem nlegharị anya ihu igwe. Anyị ga-agbanwe na ụlọ ọrụ anyị site na ọgbụgba ara na mmepe, ọrụ mega, ụgbọ mmiri ndị mega, ụgbọ mmiri ndị na-eme mkpọtụ na njem nlegharị anya nke jiri usoro a nwee obere nchegbu maka gburugburu ebe obibi. Anyị ga-agbanwe ọtụtụ ihe n'ọdịnihu dị nso ma zere ịlaghachi na ihe mere na njedebe nke 2019 - okpu "gara aga" abụghị ihe ga-adigide.
M na-atụ aro ka Juergen na webinar n'oge na-adịghị anya na aha ya bụ “IHE O D ”MMA” na ụlọ ọrụ ndị njem ga-abụ isiokwu na-atọ ụtọ n'ihi na gọọmentị niile na ọbụnadị UNWTO na-elekwasị anya na ọnụọgụ ọnụọgụ na ụtụ, ọ bụghị na mma na gburugburu ebe obibi, nke anyị ka ga-esetịpụrụ ụkpụrụ na njirisi. Kedu ihe ga-eme nnukwu ụlọ nkwari akụ, ebe ntụrụndụ, na ụgbọ mmiri na 2020s? Gịnị banyere okomoko gabigara ókè, mega-hotels, na ụkpụrụ echiche efu ndị dị oké ọnụ? Kedu ka o si metụta ịdị mfe na “okike”? "Nwere obere ihe mara mma" laghachi n'ihu na etiti? Gịnị banyere “obere olu, ọnụ ahịa dị elu”?
Gịnị bụ “ihe ọhụrụ” ahụ?
Enwere "ọhụụ ọhụrụ" ndị njem ga-enwerịrị? Ihe atụ pụtara ìhè bụ usoro nchekwa ọdụ ụgbọ elu… anyị na-agagharị na-enweghị mgbochi ma ugbu a anyị nwere usoro nchekwa dị oke egwu, na-ewe oge, yana usoro nchebe iji soro n'ihi mwakpo iyi ọha egwu na ụgbọ elu na njide na ọtụtụ mmebi iwu ndị ọzọ dị ka mpụga iwu na-akwadoghị. Anyi ga-enwerịrị usoro niile dị oke oke nke mkpuchi, ịsa aka, fogging / sanitizing ụlọ maka nje virus, iwepu nri, wdg nke bụ 1. dị oke ọnụ 2. siri ike ijikwa ogo zuru oke 3. Ike ọgwụgwụ na igbapu na njikwa 4. O yiri ka ọ dịghị mkpa na gburugburu ebe anyị na-enweghị COVID (ma ọ bụ na anyị ga-echegbu onwe anyị gbasara ndị ọbịa). Maka ugbu a, ee, ihe ndị a bụ ihe achọrọ na omume anyị kwesịrị ịtachi obi, mana ogologo oge anyị ga - eche naanị….
Otu uru Tanzania nwere ndi na eto eto ya na otutu uzo esi nweta nri; ịbụ mba pere mpe mepee emepe, ije ozi, obodo mgbagwoju anya bụzi uru; njirimara ndị a nwere ike iso mee ka ọnụọgụ ọrịa anyị dị obere (niile sitere na okwu ndị a na-ebubata) na enweghị nnyefe na ndị mmadụ.
Echere m na enwere obi abụọ ọ ga-enwe ma ọ dịkarịa ala nkwụsịtụ nke iwu ọhụrụ ndị a nke "nchekwa" n'ihi na gọọmentị na-eche nche nke ukwuu mgbe a bịara n'ịhapụ njikwa na iwu ma debe ihe ndị a chọrọ ma tinye ha na US dị ka njem ebe eji ndụmọdụ ndụmọdụ njem. Ekwuputara nke a site na ntiwapụ ọhụụ ọhụụ n'ọtụtụ mba, nke mere ka ọnọdụ maka njem nleta bụrụ nke na-egbu mgbu karịa izu 2-3 gara aga. Tanzania na Zanzibar na-emetụta nke a ozugbo na ifufe na-efegide anyị na-efe ike karịa mgbe ọ bụla.
The Motto na àgwà anyị nakweere… ..
Yabụ n'ime ụwa a na-ejighị n'aka, anyị kwesịrị ịnabata ụfọdụ ụkpụrụ iji kpalie onwe anyị na ndị ọzọ ma jigide ike na olileanya:
Nwee dị - nọrọ ebe ahụ - Eguzoro otu ebe - were agha ahụ gaa onye iro ma merie nsogbu ọ bụla dịka ọ na-ebili, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịtụ anya ya. Na-agba mbọ ma na-etinye aka n’ihe ọ bụla na-aga iji nyere aka na-aga ma chepụta echiche, nhọrọ na azịza. Atụla anya na ọ ga-eme. Na nzacha mkpọtụ ma chọọ maka ụzọ dị mma (Enwetara m ọtụtụ site na webinars na isiokwu yana site na nzaghachi na blọọgụ anyị na mgbasa ozi mmekọrịta). Onwere ihe anyi puru ime.
DỌ AKA NA NT:: Ekwela ka obi daa gị mbà. N'ime izu ole na ole gara aga, enwere m ike na-agwụ ike na ụlọ ọrụ anyị n'ịzaghachi nsogbu ahụ ma enwere m olileanya, yana webinar a, ịgbanye mmanụ ọhụrụ iji bulie ọkụ nke iguzogide inye na naanị na-eche ya. Na Tanzania na Zanzibar, ike na mkpebi siri ike ka dị elu, mana anyị bụ ndị enweghị obi ụtọ na-emetụta atumatu ebe - ụfọdụ enweghị nkwekọrịta na ndị niile na-akwadoghị ma na-agbanwe kwa ụbọchị - n'ahịa anyị. Nke ahụ - site na ịrị elu na ịrị elu nke COVID-19 - bụ enyí n'ime ụlọ ahụ.
Ezigbo SOP na "ọwa ndụ" na-arụ ọrụ
Emeghere Tanzania maka njem nleta na 1st nke June, nkwalite obi ike n'oge ahụ. Ugbu a, ihe karịrị pasent 40 nke ebe ndị njem gara elegharị anya nwere ma ọ bụ nọ na mmeghe. Ma ụfọdụ n'ime ndị a na - ebute ntiwapụ ọhụụ - dịka na Florida na Spain - anyị na - echere ịhụ.
Tanzania na Zanzibar so na ndị mbụ nwere SOP zuru oke ma rụọ ọrụ ebe. Abụ m onye na-akwado maka ịkwụsi ike na mgbochi ma ọ bụ nyocha COVID zuru oke maka ndị njem nleta anyị na-abata ma ekwenyere m na nke a karịa mgbe ọ bụla na spikes ọhụrụ na-eme na mba anyị na-esite na m kwenyere na ọ bụ ngwá ahịa ahịa dị mma. Gọọmentị Tanzania etinyela iwu ọhụrụ n'izu a iji mee ka iwu a si na 10th Ọgọstụ, iji kpuchido ndị anyị na nsogbu ọ bụla ọrịa butere ma chekwaa ọnọdụ "ọkacha mma" nke Tanzania na Zanzibar iji mesighachi ndị mmekọ njem nleta anyị obi ike.
Mba ndị ọzọ na-esozi ugbu a na ọdụ ụgbọ elu gburugburu ụwa bụ ndị mbụ na-enye ule ngwa ngwa mana nke a anaghị anabata mba ụwa. Naanị ule PCR na-akwado nnabata zuru oke maka ịbanye Tanzania. Obodo UK achọpụtala, oge na-aga, uru nke ule tupu ha abata. Enweghị nchebe a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-emepụta spikes mpaghara na mpaghara njem.
Ndị isi ahụike mba ebe a eguzobekwala ụlọ ọgwụ izizi mbụ na ụlọ ọgwụ na mpaghara na mpaghara. Nke a bụ ngosipụta dị oke mkpa ma dị mkpa maka mba dị n'Africa, nke a na-akpọkarị ndị ọrụ ahụike na adịghị njikere nke ọma. Anyị ga-egosiputa na ndị naysayers na-ezighi ezi ma nwekwa ike inwe ike lekọta ụmụ amaala anyị na ndị ọbịa. Ndị ọrụ njem na-ajụ anyị maka ozi a dịka eziokwu, ya mere ọ dị oke mkpa.
Iji nyere aka mebie ihe mgbochi dị na ịga na gọọmentị Tanzania, gọọmentị bụ nke mbụ, amaara m maka ịnye ule COVID maka ndị ọbịa na-apụ na mgbanwe nke elekere 72. Nke a dị ịrịba ama ma kwesiri ka ndị mmekọ anyị na njem nleta dịka EU iji nyochaa ihe ndị ha chọrọ iche ma bụrụ ihe atụ ọzọ nke otu esi aga ebe a ga-ewepụ ihe mgbochi ọ bụla etinyere n'ụzọ anyị ka anyị na-aga n'ihu "ụkpụrụ" na njem na ọrụ akụ na ụba ndị ọzọ.
Na ala, anyị etinyela ebe anyị na-akpọ "ọwa ndụ" - ụzọ pere mpe ihe ọghọm nke mbata site na mbata na ebe mbụ aga na Mafia Island. Nke a na-eme ka ndị ọbịa nwee obi ike na mmesi obi ike na anyị maara ihe anyị na-eme, anyị dị njikere ma lekọta ha. A na-ahazi ndokwa a na ụkpụrụ ọdụ ụgbọelu na njikwa ndị njem na mba ụwa na nke ụlọ na ntinye ụgbọ ala anyị ahọrọ. Anyị na-eziga ndị ọbịa niile na-abịa ezumike na nke ọ bụla na-ajụ maka ezumike - ọ bụ ozi ahịa dị mma - ma anyị abanyela ya wee zigara ndị nnọchi anya anyị niile ndepụta iwu na atụmatụ anyị.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ndị njem na ndị njem nleta na Tanzania ejibeghị ozi ma ọ bụ chọọ asambodo nke “njem dị mma ”. Anyị na-atụ anya na ha agaghị eme n'ọdịnihu. Anyị enweela webinar na otu a na isiokwu a ka m wee ghara ịkọwapụta ya. Naanị ikwu OZI dị mkpa karịa ihe ọ bụla ọzọ, gụnyere akụnụba. Enwere ọtụtụ mba nwere asambodo "nchekwa" WTTC mana ha nwere nnukwu ọrịa COVID na ịrị elu! Anyi choro ka obodo anyi sonye na otu a?
USA etinyela Tanzania na ndepụta nke “nwere ike ime njem” maka ụmụ amaala ya ma anyị nwere olile anya na EU ga - emekwa, mana ọ bụ iche iche na nloghachi na - egbochi mmasị na njem esenidụt ugbu a. Ndị ọrụ nleta na-echegbu onwe ha maka na ha nwere ike ịnya ebe a n'ihi ọrụ ọzọ ụgbọelu na-eme ọzọ na ịhazigharị njem ụgbọ elu na Tanzania yana atụmatụ ọnụahịa na-agbanwe agbanwe.
Rụsi ọrụ ike na mmekọrịta chiri anya n'etiti ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị ọrụ nzuzo dị oke mma na ịnagide nkwadebe mana enweghị ike ịbelata enyí n'ime ụlọ ahụ doro anya n'ihi na anyị enweghị usoro DMO na mbọ PPP dabere na ndị isi
N'iche nsogbu a ihu, anyị ga-edebe ya n'ezie site na ịghọta echiche ụwa, ọ bụghị naanị ọnọdụ ụlọ anyị, nyochaa ya na-agbanwe site na nyocha data sitere na UNWTO, nsonaazụ nyocha ajụjụ (kwa izu 2 ọ bụla na North America na UK), ozi gọọmentị na njem mgbochi, spikes ọhụrụ na ntiwapụ nje na ihe ha pụtara, na na. Ọ bụ ọrụ nke 'metadata' nyocha na ịkọwapụta ma chọta ebe ndị ahụ.
Otu ihe dị mkpa nke ọnọdụ a bụ mmekọrịta mmekọrịta chiri anya nke mepụtara, ọkachasị na Zanzibar, mana ndị a dabere na ndị mmadụ n'otu n'otu ma chọọ nnukwu ntinye oge na ume iji rụọ ọrụ. Emeela ka mkpa maka otu DMO dị iche iche maka ngalaba dị iche iche emere maka mpaghara ma ọ bụ ọnọdụ ụfọdụ ebe. Nzaghachi nwayọ ma ọ bụ ezughi ezu site n'aka ndị otu dị mkpa egosila. A ga-edozi ndị a n'ọnwa ndị na-abịanụ site na ndị minista nwere ọrụ na mbadamba njem na ụlọ ọrụ.
Na Zanzibar, Mịnịsta na ndị njem njegharị bụ isi na ahụ ike, akụrụngwa, na ngalaba ụgbọ elu ọrụ rụọ ọrụ iji mesighachi ndị nnọchi anya mba ofesi na EU iwepụ ihe mgbochi njem maka agwaetiti ahụ na nke a na-amị ezi mkpụrụ. Utionkpachara anya dị mkpa mana ọ dịkwa eziokwu, na a gọziwo ebe anyị na-aga site na mmetụta dị mfe site na COVID-19 nakwa na ezigbo SOP dị. Mgbalị nke ndị ogbo ha na ala na ọnụ ya na ndị njem nleta na Tanzania na ndị isi na-eme njem site na mba ndị si na Germany pụta na-aga n'ihu.
Bur maka ebe dika Tanzania, nke puru anya ma nweghi nmekorita na ndoro-ndoro ochichi na ahia ndi ozo, enwere ihe ima aka karie nke ahu na nke ndoro-ndoro ochichi.. Nke a bụ ịkpọte ndị na-eme njem nlegharị anya nke mba mgbe ị na-ekpebi ebe a ga-elekwasị anya n'ịzụ ahịa na ịkpọtụrụ n'ọdịnihu - gbadoro anya na "ndị enyi" na mba ndị ahụ gbalịrị ịmekọrịta ebe ị na-agakọ na-arụkọ ọrụ n'oge ọrịa na-efe efe.
Anyị nwere naanị ndị ọbịa 350 na họtel na Zanzibar ugbu a na ikekwe pere mpe na safari na ogige ntụrụndụ anyị, nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke Mbugharị ụwa a ma ama. Cheedị ebe ị nọ ugbu a. Anyị na-ere ahịa dị ka Ugbu a bụ oge njem…. Low olu, kemgwucha ala puru omume nke ọrịa, ogige ntụrụndụ niile ka onwe gị, lodges, na n'ogige niile gị na pụrụ iche ọrụ na-elekọta…. Are bụ VIO na ndabara.
M ga-achọ ugbu a ịgbanwee elekwasị anya site na mba rue ọkwa mpaghara, ịkekọrịta ụfọdụ usoro anyị mepụtara ma tinye n'ime mkparịta ụka anyị na ndị na-ege anyị ntị aka "ahịa".
Nke mbụ, anyị nwere profaịlụ ngwaahịa nke dabara adaba na "ọhụụ ọhụrụ" na atụmatụ mmeghe nke ụlọ nkwari akụ anyị na ebe obibi na ogige, ogige na njem nlegharị anya dị n'èzí, gụnyere nri ọhụrụ, nri na-adịghị edozi ahụ, ọtụtụ ọkụ anyanwụ, ọhụụ ikuku, …… na ndokwa njem na-ezere ebe ndị na-ekwo ekwo,… were gabazie. Nke a nwere ike ịbụ oge Africa dị ka "ebe kachasị amasị" yabụ ụzọ ochie anyị na ụdị etu anyị si eme ihe nwere ike ịchọta ebe ha ọzọ. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na echiche a na ahịa anyị n'ọdịnihu dị ka ọ dị Laghachi n'oge gara aga. Nke ahụ ga-ada ụda na m kwenyere.
Anyị amatala ugbu a “Ndị mmekọ kachasị na njem” na “ndị ọsụ ụzọ ọhụrụ”, Ndị dị njikere ịga njem na ahịa ndị ahụ na-enweghị oke mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ ngalaba ndị na-emetụtaghị mkpọchi. N'ọnọdụ anyị, nke a gbadara ruo ohere ole na ole, mana ka ọ dị, ha nọ ebe ahụ ma ọ na-eju anyị anya site na mmasị na-aga n'ihu na ọtụtụ mba ndị ọbịa anyị na-abịa, n'agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị aghụghọ.
Echere m na njem nleta na etiti ọnụahịa ọnụahịa (ebe anyị kachasị nọ na Tanzania na Zanzibar) na-agbada ụzọ abụọ: -
1. The "mgbanwe" n'ihe ize ndụ-ndị nwekwara ike ịbụ ndị na-akwụkwọ n'oge, na-eme mkpebi ngwa ngwa na ndị maara ihe na ihe ọmụma ka ha na-aghọta metrics na ihe ize ndụ na ike iri uru nke ezi na-enye na ebe ha chọrọ ịga (ọ bụghị naanị ebe ezumike ezumike ọ bụla). Echeghị m na afọ bụ akara dị mkpa mana ha nwere ike bụrụ 25-40 (ọ bụghị ndị Millenials bụ ndị otu n'otu ma ọ bụghị ndị njem ọnụahịa dị n'etiti). Ha niile ga-enwe ikuku ikuku na ego ọrụ, wdg ma ọ bụ otu gụnyere SOLO ndị njem (nke ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị). Ọtụtụ nwere ike ịbụ LGBT + nke bu 20% nke njeghari nke uwa. Otu a nwere ike bụrụ ndị nwere ike ịrụ ọrụ site n'ụlọ wee kwụrụ iche na nloghachi bụ
abụghị nsogbu. Ọzọkwa, enwere omume na-ebili na Na-arụ ọrụ site na ụbọchị ezumike gị nakwa na anyị na-achọ iji uru a na-eme ihe na otu a, na-enye ọnụ ala, ọnụnọ ogologo oge (anyị nwere ime ụlọ ahaziri iche maka ndị ọkachamara chọrọ tebụl, wifi dị mma, ọtụtụ ntọala eletrik mba ụwa) na nnukwu ndị isi.
2. “Ndị nhazi” ndị kpachapụrụ anya, ga-ahọpụtara nke ọma ma mee atụmatụ tupu oge eruo ọ bụchaghị n'ihi na ha na-atụ ụjọ ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ, ọrụ ndị na-ekwupụta oge ezumike na nwunye ndị na-arụkwa ọrụ na, ikekwe, ndị enyi chọrọ ịga kwa ịhazi. Ndị a bụkwa ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche ezinụlọ yana ọ ga-abụ na ha dị ezigbo mkpa mgbe a gbachara ha, mgbe COVID gasịrị.
3. Echere m na Millenials bụ otu nke kụrụ aka nke ukwuu - maka ọtụtụ ihe kpatara ya - ma ọ dịkarịrị ka ha ga-eme njem nwa oge tumadi n'ihi ụzọ ha si eme njem, ọmụmụ ihe, ịchọ ọrụ (nza na-apụ nke ọrụ) ma ọ dị ka ọ bụ ndị ọghọm nwere nsogbu. Nke a nwere ike ịdị na-ebelata nyocha ọhụrụ nke millennials na USA (etiti ọnwa Julaị).
N'ezie, enwere okwu gbasara ego a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ma na-arapara n'ọrụ ga-eme ka ndị mmadụ chee echiche ugboro abụọ, mana m na-atụ anya na ndị mmadụ na-egbochi ndị mmadụ echekwala ego ma mụta ego ole ha nwere ike ichekwa
Nwee echiche ziri ezi
Jiri nlezianya tụnyere ebe njem ahụ na nhọrọ ndị ọzọ nke njem ahụ ga-eme ma n’obodo gị ma ebe ọzọ ka ndị ọbịa nwee ike ịme njem ha dị mfe karị. Na-nne Mmetụta igbe niile. Are dị. Ihe niile na-arụ ọrụ dịka ọ dị. Ihu igwe dị mma. Innovation adịghị i imitateomi n'ihi na ebe gi, ebe ị na-aga di iche ka i puta na azu, tugharia iru otele gi ma juo onwe gi ajuju a “Gịnị ka anyị na-enye na kedu ka anyị ga - esi mee ya nke ọma”. ma sọsọ zọọ onwe gị iji meziwanye ma nwee ọkwa ile ọbịa kachasị elu, ọ bụghị nri abalị kachasị ogologo ma ọ bụ nhọrọ kachasị nke whiskeys. Gwagharịa ile ọbịa gị ma mee ka “ile ọbịa” dị na ya ma ọ bụrụ na i jiri obi eziokwu chee na ọ na-agbapụ ma ọ bụ na-eleghara anya.
Zere izisa ozi na-ezighi ezi, n'agbanyeghị agbanyeghị aghụghọ
Mmeghachi omume m ozugbo na vidiyo niile na asọmpi aghụghọ dị n'etiti agbụ ụlọ nkwari akụ, AIRBNB, wdg na "nhicha miri emi" bụ otu n'ime na-eche ma - tupu COVID-19 - ụlọ nkwari akụ ndị a akpachaghị anya banyere ịdị ọcha na ịdị ọcha. N'ezie, ọ bụ echiche na-ezighi ezi, mana vidiyo vidio dị egwu na ozi ndị ọzọ nwere ike ịgabiga usoro ahụ dum wee bulie 'ụjọ na ịkpọasị'. Anyị kwenyere na ọ ka mma ịkọ ozi ọhụụ na-ekwenye ekwenye nke ga-agbadata nke ọma na ahịa anyị na-ezube, ebe ha na-eri ihe ndị na-adịghị mma 24hrs kwa ụbọchị.
Echere m na ọ bụ ihie ụzọ mepụta atụmatụ ọ bụla - ọkachasị site na bọọdụ ndị njem mba ma ọ bụ nke DMO - nke ahụ pụtara na ị bụ 1. na nsogbu ma chọọ ndị ọbịa ịbịa ASAP (onye ọ bụla maara etu njem njem njem si adabere na ndị njem nleta), ma ọ bụ 2. na-ejikarị na-eme ka ndị dị otú ahụ a uba ị nwere ike ọkara gị price na ka na-adị ndụ…. ya mere maa ọ bụghị ụdị mkpọsa ndị a. Ndị njem ahụ dị njikere ịme atụmatụ ezumike ugbu a nwere ike kpachapụ anya ma nwee nghọta. Emechara mmadụ niile achọpụta na ọnọdụ abụọ a ga-adarịrị ebe aga…. Emela ka ọ ka njọ na nkwupụta dịka “Anyị na-eche gị…” “Mgbe ị nwere ike ịga njem ọzọ ebe a anyị bụ….
Ka anyị wulite mmadụ gburugburu echiche nke “njem ọhụrụ” (nwayọ, miri emi, obiọma, mpaghara, nkwado, ihu igwe) ya na ile ọbịa n'ihu na etiti - dịka na-ele ọbịa ọ bụghị onye na-abụghị onye. Juergen nwere usoro a magburu onwe ya nke iwughachi Njem na ndị ọzọ, anyị nwere Board of Africa Tourism Board na UNWTO na-akwalite “UMUAKA BLUE”Ya mere akụ niile ahụ dị. Ọzọkwa, biko - gị onye na - agụ ya - duru gị ụzọ ma mee ya isiokwu “ebe kachasị mma".
Lee ụfọdụ ihe 20 ma ọ bụ karịa anyị mere ma ọ bụ nwere ike iwere dị ka mba m ga-achọ ịkọrọ gị: ihe ndị a abụghị maka ịkwado azụmahịa gị na ihe ọzọ n'ihi na ọ na-esi ike ịme ụlọ nkwari akụ ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mkpuchi ma ọ bụ azụ. nhazi unit. Ọ bụ maka ịme ihe n'ọtụtụ ọkwa dị elu na obere ma ọ bụ enweghị ụgwọ ọzọ, na-eji oge na ndị ọrụ nọ n'okpuru ọrụ. Omume a gụnyere ndị nke DMO na ndị njem njem nwere ike ibido ma ọ bụ jiri ya na ahịa.
1. 2020 bu BGH A Afọ Furu efu Njem nlegharị anya chọrọ ịgbanwe. Achịcha na-adịghị agwụ agwụ na 30% nke nri nri chọrọ ịkwụsị. Enwere ike ịtụle mmebi ndị na - emebiga ihe ókè na usoro gburugburu ebe obibi. A ga-elebara njem nlegharị anya anya. Anyị kwesịrị ịkwụsị ma tụleghachi ụdị azụmaahịa na onyogho anyị ma melite njikwa na onyinye ndị a na-aga. Anyị abụla onye siri ike na onye nkwalite na ịkwalite “UMUO njegharị”Maka enwekwu ọ enjoyụ na ezigbo ahụmahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ezigbo ngbanwe na njem nlegharị anya nke na-adigide na mpaghara yana ihu igwe anyị kwesịrị ịgbanwe ụzọ anyị si ewu ma na-arụ ọrụ ile ọbịa anyị. Nke ahụ abụghịdị arụmụka.
2. B AVRA ọ bụrụ na imegheghị maka azụmaahịa ị ga-efufu ndị ahịa. Nke a dị oke mkpa maka mmụọ ndị ọrụ na itinye aka na ijigide nka. Anyị na-ewere ọnọdụ anyị dị ka otu n'ime IHERE na EZIOKWU gaa ahịa. Ọ ga-adị ọnụ ala karịa ka anyị mechie ma gụọ ndị ọrụ anyị niile - dịka ọtụtụ ndị asọmpi anyị mere - mana maka anyị, nke a bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na anaghị anabata. N'oge a anyị na-agbasi mbọ ike ịgbake site na arụmọrụ anyị naanị maka ụgwọ ọnwa mana anyị nwekwara ebe nzọpụta maka ndị nwere mkpa dị ukwuu maka ezinụlọ ma ọ bụ ibu ọrụ ego ọzọ dị ka agụmakwụkwọ
3. Nọgide na- STLỌ NKE Ochie ọ bụghị ya OZI OZI. Oldkpụrụ ochie gị kwesịrị ịdị elu karịa gịnị kpatara ị ga-eji gbanwee? Inweta onwe gị na otu AHENTRERS NDERS ỌR SO maka ebe iga
4. Nke a na agbatị na ozi Azụmaahịa, dị ka nkịtị, My mbụ blog na-elekọta mmadụ media post ke mbubreyo March nwere ozi na anyị na-arụ ọrụ na Mafia Island dị ka Kinasi Lodge dị ka ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe gbanwere. MA anyị etinyeworị ihe niile dị mkpa SOP. Anyị ezigaghị ozi banyere "nhicha miri emi" ma ọ bụ yi ihe mkpuchi ihu ma ọ bụ omume ọ bụla na-abụghị nke nkịtị. Anyị debere ozi na anyị bụ MATA, Kwadebe, ma lekọta. Nke a enyerela nke a nke ọma site na nke anyị OGUGU ọnọdụ, ma ọbụghị n'oge anyị kọwara ozi a. Anyị anaghị amanye ndị ọbịa ka ha nyochaa ọnọdụ okpomọkụ ọzọ (a ga-eme ya ugboro 4 tupu ha erute anyị). Anyị na-eme ihe eji akacha mma nchekwa, ihe nhicha ahụ, uwe aka, na ihe nkpuchi ma achọghị iji ha.
5. Zube ahịa nke Nwere ike njem na O yikarịrị ka ị ga-aga njem. Egbula ozi gị na ịntanetị. Anyị maara na ndị mmadụ chọrọ ịga site na nyocha niile, yabụ etinyela na mmụọ ha. Zube kpọmkwem ngalaba dị ka Ihe ize ndụ na SOLO njem dị ka ha nọ n'grouptù Kachasịsịsịsịsị mma. Anyị na-arịọ ka uche ha nke njem na-akpọ ha anyị Ndị Ọsụ zọ Na-agagharị Ọhụrụ. Nke a gụnyere onyinye ọhụrụ anyị na - etinye ọnụ n’ahịa Ndị gbara ọsọ ndụ ndị na-achọ ogologo oge ịnọ na ebe nchekwa, ebe mara mma nke na-akọrọ igbe niile 'counter-COVID'. Ndị ọbịa nwere ike ịnọ ọnwa 3 na Tanzania wee nwee ike ịgbatị nke a na ịrịọ maka ọnwa 3 ọzọ, yabụ anyị abịarutelarị.
6. A Ugbu a bụ oge njem mkpọsa sitere na ụlọ ọrụ niile ọkachasị DMO na ndị ahịa njem nlegharị anya. Ọtụtụ n'ime anyị ọrụ anyị na-adịghị na-ele anya na ohere si nwere ike njem 'n'ọnọdụ na-aghọta ihe a oké oge ọ bụ njem. Ka ihe a na-adọta ndị mmadụ, ndị mmadụ ga-agagharị ma were ohere pụrụ iche.
7. Anyi na-eme Nyochaa na ịkọwa Ajuju obula (dika oria ojoo na mmachi) emere na ahia ndia ka ekpughere omume, ihe ndi metutara mkpebi, mgbanwe obi, na onodu nke ndi ochichi tinyere. Enwere ọtụtụ ozi n’ebe ahụ mana ọ na-ewe m ihe ruru awa iri na abụọ kwa ụbọchị na ntanetị iji nyochaa ya niile ma nwee uche maka ya. Ma nke ahụ bụ nsogbu.
8. Mee ya ngwa ngwa Edebanye aha na-enweghị ihe egwu na enweghị nkwụnye ego yana enweghị ụgwọ a kagbuo n'oge ọ bụla. Anyị na-arịọ naanị ka ndị ọbịa anyị gwa anyị gỊNỊ ha na-akagbu (ọtụtụ eyigharịrị) yabụ na anyị nwere ike ịmụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu ma ọ bụ ihe mgbochi na anyị nọ na njedebe a nwere ike ịnagide ma ọ bụ nyere aka wepu ya.
9. TUPU I BU IJU IWU NA-EKWU ANYA anyị na-enye WhatsApp, nkata nkata na ozi nzaghachi email ozugbo iji gwa ndị ọbịa nke ọnọdụ njem, ọnọdụ dị na ebe anyị na-aga, nchegbu ọ bụla ha nwere, ihe ị ga-atụ anya mbata na "paseeji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" na agwaetiti Mafia
10. ENYEMAKA Chọta nhọrọ njem dị ọnụ ala ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ahịa gị ị ga mba gị (Tanzania) wee ruo ebe njedebe gị; na-enyere aka na iduzi ha n'ihi mgbagwoju anya na enweghị ozi ọmụma a pụrụ ịdabere na ya. Nke a bụ nchegbu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa anyị niile na ụzọ ọhụụ ọhụụ. Anyị na ndị ọrụ ụgbọelu ụgbọ elu ụlọ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gosipụta nchegbu na ịdị njikere a. Anyị na-ezute onye ọbịa ọ bụla na-abata n'onwe anyị ma na-emeso ha dị ka VIPs dị oké ọnụ ahịa iji nye mmesi obi ike ma hapụ ihe ọ bụla ohere
11. Bilienụ ọkọlọtọ anyị na-agbasi mbọ ike imeziwanye ọbịbịa anyị na onyinye F&B, listi mmanya, ihe omume na njem mmụta site na ịtinyekwu mmetụ na ahụmịhe. Dịka ọmụmaatụ, nleta nke oke ọhịa na ụsọ mmiri mara mma na Mafia Island na-esonyere nleta a haziri ahazi na obodo ime obodo na nri nri ehihie nke usoro nri anyị na-akwadebe ka ndị ọbịa wee nwee ezi mmetụta OBI ANYANWE ANYI OWO F&B, wdg nke bu nkwalite n’onwe ya.
12. EGO nye onyinye gị dịka ndị ọrụ na-enweghị ọrụ nwere ike ịgbara ụlọ ndị na-enyeghị nke a, wee soro njem mmụta, nke nwere ike si otú a nwekwuo okomoko, na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị. Ndị ọrụ ndị ọzọ - eji ejiji nke ọma na yunifọm ọhụrụ, nwere ike ịgbakwunye iji zute & kelee ọrụ na ọdụ ụgbọ elu mpaghara mgbe ị na-anabata ndị ọbịa. Mee ihe niile gbasara onwe gị na obere ọrụ ga-adị mfe. Anyị na-enye ndị ọbịa anyị a AHA TAG rutere ma gwa ha ka ha yiri ya ụbọchị abụọ ruo mgbe ndị ọrụ niile nọ n’ihu ahụ mara aha ha ma gwa ha okwu n’onwe ha, onye ọrụ ugbo ahụ maara ihe ọ drinkụ theirụ ha na-a drinkụ ma ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ maara tebụl kachasị amasị ha.
13. BU EGO NA EGO anyị niile anụla banyere iji oge a maka ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ịme ọzụzụ n'ime ụlọ nke nwere ike ileghara anya na echefuru echefu. Nke a gụnyekwara ihe ị ga-eme n'oge a na COVID-19. Anyị nwere ọzụzụ na-aga n'ihu n'egwuregwu mmiri, njem mmụta, na nlekọta ụlọ na, dị ka mgbe niile, na kichin.
14. Akwụsịla inwe ego na ụlọ ndị dị ọ bụrụ na ị nwere mmefu ego. Mmemme itinye ego anyị na ụlọ na ọrụ akwụsịbeghị ma anyị nọ AKWADKWỌ oge niile, ọbụlagodi ugbu a na nsogbu niile gbasara ego. N'ezie nke a choro ego na ulo oba na nchekwube mana anyi huru ya dika Uru uru nwekwara.
15. EBUGHL EGO Kpachara anya ka a ghara ịhụ gị ka ị na-awụli elu n’agha. Ọmụmaatụ, na mberede ọhụrụ catchword bụ "adigide njem". Kedu ihe kpatara iji ya ma ọ bụrụ na ịdebanyebeghị na nkà ihe ọmụma a ogologo oge gara aga? Ọ na-eme ka ọ dị gị ka ị bụ onye na - achọ ọdịmma onwe ya naanị maka ịme ahịa. Ndị njem nwere ike ị nwere ike ịchọkwu ọdịdị na "nkwado" mana ma mgbanwe na ndị njem na-adịgide adịgide ga-abụ
na-atọ ụtọ ịgba àmà. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa ụlọ ọrụ eme Bụrụ onye “na-adigide” n’agbanyeghi na ọsọ ọsọ iji nweta okwu a na ire ahịa agafeela. Mepụta gị onwe gị na ọnọdụ na ozi ma ọ bụrụ na ị na-ama “akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ” mata ya na gị ahịa na a aghụghọ n'ụzọ. Emefula ya ..
16. MONITA AKW REKWỌ NA-EGO-PHRASES dị ka ibi ndụ dị mma, oghere mepere emepe, okike, nnu, ikuku ọhụrụ, wdg dakọtara ndị a na ebe a ga-ahụ igbe ole ha tụrụ akụrụ wee rụọ ọrụ na soshal midia na ozi blọgụ dabara na okwu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nhazi na ụlọ nke ụlọ nkwari akụ anyị (bungalows dị iche iche, nnukwu oghere na ebe iri nri, ebe dị iche iche, bungalows dị iche iche) na ebe anyị na-aga ebe niile na-esonyere asụsụ ọhụrụ - oke osimiri, ikuku nnu, okike, kemịkalụ ọhụrụ - n'efu nri - na - enye anyị ngwa ahịa ahịa dị ike. Cheta na oke ibu abụrụla nsogbu dị n'okpuru mkpọchi ma na-akwalite "ahụike" (B NOTGH more karịa, ibu, ukwuu) ga-adọrọ mmasị na akụkụ nke ahịa ahụ.
17. Debe ANCEBANCE ANDM AND NA UMMUM mmadụ na nchọpụta nke njem nọ n'ọnọdụ. Nke a bụ ozi ọzọ dị mkpa m tụtụtara n'otu webinars anyị na-adịbeghị anya. E kwuwerị, nke ahụ bụ ihe njem bụ maka. Chee echiche dika onye njem. Anyị na-agbasosi ọrụ anyị ike kwa ụbọchị. Ya mere echefula ya na ozi gị niile, nkwalite gị, na ọgwụgwọ ndị ọbịa gị. Ekwela ka ọ furu efu na omume obi ọjọọ nke SOP na usoro "nchekwa" nke na-ewepụ ma na-ekewapụ site na imewe… njem bụ maka isonyere na ịbịakọta ọnụ na ile ọbịa bụ ihe na-esi ísì ụtọ.
18. E nwekwara oge ugbu a maka imeziwanye na mbara ỌRUT ỌHUTRM na anyị achọpụtaghachiri mojo anyị n'akụkụ a nke anyị na-eleghara anya. Anyị esorola ndị enyi anyị ochie na-emekọrịta ihe n’obodo ụfọdụ dị n’okpuru UN SDGS na mmeghari ihu igwe nke enyi na enyi dị ka nke SunX na Malta. Anyị ebidola onyinye ego ntụkwasị obi maka ọrụ a na "agbụ" maka ndị ọbịa ịdenye aha iji nyere aka na mmemme a haziri nke ọma na ọkwa obodo. Nke a ga-abara ma ndị ọbịa ma ndị obodo ahụ uru.
19. Nke a na-enyekwara aka Gosi ihe niile dị na mpaghara nke anyị na-aghọta na anyị elegharakwara n'eziokwu na na izi ozi anyị. Anyị na-echegharị ihe omume anyị ma na-abịa njem ọhụụ nke ga-agụnye obodo ndị ọzọ karị ma hụ na ndị ọbịa nwere ahụmịhe ka mma, nke miri emi karị na "Island Life" ebe a na Mafia. Offọdụ n'ime ọrụ a na-agụnye ịkọwapụta akụkọ mmiri mmiri anyị (ihe karịrị afọ 2000) na ihe ochie, yana dịka ọmụmaatụ ịdị adị nke ọdụ ụgbọ mmiri obodo.
20. ANY EV B EV IJIDE NSỌP TOR F ỌR. N'okpuru ndu nke Kọmishọna mpaghara anyị, anyị na Mafia na-eme ememme na Nọvemba 2020 iji gosipụta agwaetiti Mafia. Anyị maara na ndị njem ole na ole na mba ụwa ga-eme ya mana anyị ga-eweta ya niile na ntanetị ma jiri ụzọ a maka iso "ndị ọbịa", dịka ọmụmaatụ dị ka ndị ikpe nke ntinye asọmpi nka.
21. DUPU ahia ahia na uzo ozo nke na-aba uba dika coronavirus mana ile anya tupu i wusi bu uzo anyi. Arenye ka ị na-ezubere iche, gịnị mere, ihe oge mmiri, wdg You nwere ike imefu nnukwu ego ma na-afụ ikuku. Nọgide na-enwe ọnụnọ dijitalụ gị ma soro ndị ọrụ na ndị mmekọ na-akpakọrịta ma nọrọ na ntanetị mgbasa ozi gị na ozi ọma gị na ọrụ ndị nkịtị kama enwela obi nkoropụ na mmefu ego gị.
22. A dee maka anyị njem mbadamba: Tụgharịa mbata na ọpụpụ kaadị na ntinye / ọpụpụ ụdị n'ime a Njem Nlegharị Ọrụ Ngwá Ọrụ site na-agbakwụnye ụfọdụ obere ajụjụ na isi nlekota data. Onu ala, n'efu na bara uru. Anyị kwesịkwara inwe nke a dị ka a Ngwaọrụ dijitalụ n'ọdụ ụgbọ elu mba anyị dị ka ohere maka ndị ọbịa ịziga na ahụmịhe ha n'oge nchere na-agwụ ike na ezumike ezumike.
Rebuilding.travel bu uzo agbakwunyere banyere otu uwa ga esi jikota aka onu iji wulite njem ohuru na nchekwa nke ndi njem. Debanye aha na mkparịta ụka na www.rebuilding.travel/register